ထားဝယ်မြို့ပေါ်မှ လောကမာရဇိန်ဘုရား | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » ထားဝယ်မြို့ပေါ်မှ လောကမာရဇိန်ဘုရား	14
Posted by weiwei on Jun 21, 2012 in Photography, Travel | 14 comments
ထားဝယ်မြို့ထဲမှာ တည်ရှိတဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ထားဝယ်မြို့က ဘုရားတွေ စေတီတွေ တန်ဆောင်းတွေရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို သိရှိနိုင်အောင် တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် …
ထားဝယ်ဘုရားပုံတွေကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် …
ရှင်ကိုးရှင်ဘုရားတွေအတွက် သမိုင်းစာအုပ် ပြန်ရှာနေတုန်းမို့ နဲနဲလောက်စောင့်ပါအုန်းလို့ ကြိုတင်အသိပေးထားချင်ပါတယ် …
ကိုရင်မောင် says: ရွာထဲမှာဒီလိုခြေထောက်မှာဗွေပါတဲ့သူတွေရှိလို့လဲ…
Mလုလင် says: နံပါတ် (၈) ပုံလေး မိုက်တယ်ဗျာ။ နောက် နံပါတ် (၂) လဲ မိုက်တယ်။ တီတီ ဝေေ၀ ပိုစ့် ဖတ်ရတာ မရောက်ဖူးတာတွေ မြင်ရ … ရောက်ဖူးချင်စိတ် တွေကလဲ တားမရ စီးမရ .. အော် .. အနိစ္စ …. အနိစ္စ
ရွှေထီး says: MG ရွာသူ/ရွာသားတွေက နေရာအစုံကိုရောက်ဖူးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ…ကောင်းတယ်ဗျာ..
ကျွန်တော်တို့လို မရောက်ဖူးသေးတဲ့လူအဖို့ ရောက်ဖူးသွားသလိုပဲ…ကျေးဇူးပါပဲ..အားပေးသွားတယ်ဗျို့..
ကြောင်ကြီး says: အန်တီဝေဒို့များ တယ်ဇိမ်ကျသဗျာ..။ ဒါနဲ့ အန်တီဝေဂ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လား…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5316
MaMa says: ဘုရားထဲမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်း ရှိနေတယ် ထင်တယ်နော်။
ပုံ ၄ က ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ တူနေလို့။
ပုံ ၈ ကိုကြိုက်တယ်။ အိုင်ဒီယာလေး ပါနေလို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 143
ဟိန်း ၀င်း (ထားဝယ်သား) says: ထားဝယ်မှာ အဲဒီဘုရားကို ဘုရားကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗျ … ထာဝယ်မြို့တွင်းမှာပဲရှိတယ် … ဒါနဲ့ စကားမစပ် … မဝေေ၀ … ထားဝယ်သူလေးတွေရော မရိုက်လာဘူးလား … အလွမ်းပြေ ကြည့်ချင်လို့ … :P
weiwei says: ထားဝယ်သူတွေနဲ့ စကားပြောရတာ မလွယ်ဘူး … တော်တော်ကြိုးစားပြီးနားထောင်ရတယ် … သူတို့စကားနားထောင်ရခက်နေတာနဲ့ပဲ ဓါတ်ပုံခိုးရိုက်ဖို့တောင် သတိမရလိုက်ပါဘူး …
surmi says: ဒေါ်ဝေဝေကိုအားကျသဗျာ
နေရာစုံလဲရောက် မှတ်တမ်းလဲတင်နိုင်လို့ 
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1391
Ma Ei says: 10 မှာ ခိုကလေးတွေ
6 နဲ့ 12 လဲလှတယ်…
နောက် Post တွေကို စောင့်မျှော်နေပါမယ်…
mamanoyar says: အခုလို တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဆူး says: လူပျောက်ကြေညာ ထည့်တော့မလို့ စဉ်းစားနေတာ.. အခုမှပဲ ပေါ်လာတော့တယ်။
weiwei says: ရွာထဲမှာ ရှိနေပါတယ် ဆူးရေ … အင်တာနက်လိုင်းတွေက သိပ်မကောင်းလို့ ကွန်မန့်တောင် ပေးမရတာနဲ့ ပို့စ်လဲ မတင်ဖြစ်တာ …
ရွာထဲကိုတော့ မ၀င်ရမနေနိုင်ဖြစ်နေတုန်းပဲ ….
သားဦး၊မြေးဦး says: မမဝေဝေ. ရေ ထားဝယ်ဖက်က လူတွေစကားပြောသံက ရခိုင်သံနဲ့ ဆင်ပါ
တယ်ဗျ။ဟိုးတုန်းက ရခိုင်ကလူတွေ ဓါးသွားဝယ်ကြရင်းနဲ့ ထားဝယ်ဆိုပြီး
မမဝေ ကမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းစွန်းရောက် နေပီနော်။
King of Secrets (Bo Min) says: သပ္ပာယ် ပါပေတယ်။
Comments By Postအမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - padauk moe - padauk moeနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - ko pauk mandalay - Ei Kyipyarအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - TNA - Mr. MarGaရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - padonmar - Traditional Medicineမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - naywoon ni - black chawတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - TNA - Traditional Medicineရထား ထွက်တော့ မယ် - TNA - Mr. MarGaCongress - ကထူးဆန်း - Traditional Medicineဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - Aung Myat Lin - kyeemiteသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အလင်း ဆက် - Traditional Medicineဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - အလင်း ဆက် - Traditional Medicineသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - Mobile13လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - Traditional Medicine - မောင် ပေအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - Traditional Medicine - ဖော့(စ)ထရော့ချာလီဦးဖိုးလူနှင့် ပထမဆုံးများ - Mobile13 - မောင် ပေအဟံ ပထမံ - မောင် ပေ - Mr. MarGaပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - Hnin Ei - Ma Eiအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - TheWinner Getprizeကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - လူကလေး - သူကလေးငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - လူကလေး - သူကလေးလူပါး ပုလင်းထိ - Ma Ma - Ma Maကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - ဦးဦးပါလေရာမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ko pauk mandalay - panpanအတ္တဆန် - Ei Kyipyar - ကြောင်ဝတုတ်Passport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - ကြောင်ဝတုတ် - awra-choEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities